I-American Revolution - ISivumelwano Sobumbano (1778)
Imbali kunye neNkcubeko Revolution yaseMerika
Ukuguqulwa kweMelika: Isivumelwano soManyano (1778)
Isivumelwano soManyano (1778) Imvelaphi:
Njengoko i- American Revolution yaqhubela phambili, yacaca kwiContinental Congress ukuba uncedo lwangaphandle kunye nemibutho yayiza kubakho ukuphumelela ukuphumelela. Ekuvukeni kweSibhengezo soBu-Independence ngoJulayi ka-1776, i-template yenzelwe ukusebenzisana kweentengiso kunye neFransi neSpain. Ngokusekelwe kwiinjongo zokuhweba okukhululekayo kunye nokulungelelanisa, lo Mnqophiso woMzekelo wamukelwa yiNgqungquthela ngoSeptemba 17, 1776.
Ngomhla olandelayo, iCongress yamisela iqela labakhomishinala, liholwa nguBenjamin Franklin, la thumela eFransi ukuba ixoxisane ngesivumelwano. Kwakucatshangelwa ukuba iFransi yayiza kubonakalisa umlingane njengoko yayifuna ukuphindisela ekunqobeni kwayo kwiMfazwe Yeminyaka eyisixhenxe kwiminyaka elishumi elinesithathu ngaphambili. Nangona kungenakuqala ukuba kwenziwe umsebenzi wokucela uncediso lwempi, ikhomishoni yafumana i-oda eyalela ukuba ifune indawo yokurhweba yesizwe esithandekayo kunye nokuncedisa impi kunye nokubonelela. Ukongezelela, babefanele baqinisekise izikhulu zaseSpeyin eParis ukuba iikholoni zazingenalo iiplani kumazwe aseSpain eMelika.
Ekholiswa yiSibhengezo soBu-Independence kunye nokunqoba kweMelika kwi- Siege yaseBoston , uNgqongqoshe waseFransi wamazwe angaphandle, u-Comte de Vergennes, wayeqala ukuxhasa uxolo olupheleleyo kunye neenkoloni zokuvukela. Ngokukhawuleza selehlile ngokulandela uGeorge George Washington kwiLong Island , ukulahlekelwa kweSixeko saseNew York, kunye nokulahleka okulandelayo kwi- White Plains naseFort Washington ngaloo hlobo kunye nokuwa.
Ukufika eParis, uFranklin wamkelwa ngenyameko ngubukhosi bamaFrentshi waza wathandwa kakhulu kwiintlalo zentlalo. Ebonwa njengommeli we-republican simplicity and honestness, uFranklin wazama ukuxhasa imbambano yaseMerika emva kweemifanekiso.
Ukufika kukaFranklin kwaphawulwa nguRhulumente kaKumkani Louis XVI, kodwa nangona u-King unomdla wokuncedisa amaMerika, iimeko zelizwe kunye nezobupolisa zazingavumi ukubonelela ngoncedo olusemthethweni lwempi.
I-diplomat ephumelelayo, uFranklin wakwazi ukusebenza ngeendlela zokubuya ukuze avule umlambo we-covert uncedo esuka eFransi ukuya eMelika, kunye nokuqala ukuqeshwa kwamagosa, afana noMarquis de Lafayette noBaron Friedrich Wilhelm von Steuben . Kwakhona waphumelela ekufumaneni imali ebolekayo ekuncedeni ekuxhaseni imali yokulwa. Nangona kukho izibhengezo zaseFransi, iintetho malunga nokusebenzisana kwaqhubela phambili.
Ukuchithwa ngenxa yokusebenzisana namaMerika, iVergennes yachitha ixesha elingaphambili le-1777 ekusebenziseni ukugcina ubudlelwane neSpeyin. Ngokwenza njalo, wanciphisa iSpeyin ukukhathazeka ngeenjongo zeMelika malunga namazwe aseSpain eMelika. Ukulandela ukunqoba kweMelika kwi- Battle of Saratoga ekupheleni kwe-1777, kwaye uxhalabele malunga nemfihlo yaseBrithani emininzi kumazwe aseMerika, iVergennes kunye noLouis XVI bakhethwa ukuba baxhaswe ngokusekela iSpanishi baze banikeze uFranklin ukusebenzisana komkhosi.
Isivumelwano soManyano (1778):
Intlanganiso e-Hotel de Crillon ngoFebhuwari 6, 1778, uFranklin kunye nabanye abaphathi be-Silas Deane no-Arthur Lee batyikitya umnqophiso kwi-United States ngelixa iFransi yayimelwe nguConrad Alexandre uGérard de Rayneval. Ukongeza, amadoda asayinwe isivumelwano seFranco-American of Amity kunye nezoRhwebi esekelwe ikakhulu kwi-Model Treaty.
ISivumelwano Sokubambisana (1778) sasisisigqibo sokuzivikela esichazela ukuba iFransi iya kunxulumana neUnited States ukuba umntu owake waqala ukulwa neBritani. Kwimeko yemfazwe, iintlanga zombini ziza kusebenzisana ukuze zithintele intshaba.
Umnqophiso wachaza namabango omhlaba emva kwemfazwe kwaye ngokuqinisekileyo unikezwe i-United States yonke insimu eyenyelwe eNyakatho Melika ngelixa iFransi yayiza kugcina loo mazwe kunye neziqithi ezithathwe kwiCaribbean naseGulf of Mexico. Ngokubhekiselele ekupheliseni imbambano, umnqophiso wachaza ukuba akukho cala luza kwenza uxolo ngaphandle kwemvume yesinye kwaye ukuzimela kuka-United States kuya kuqatshelwa yiBritani. Inqaku liye lahlanganiswa lichaza ukuba iintlanga ezongezelelweyo zingabambisana kunye nethemba lokuba iSpeyin iya kungena kwimfazwe.
Iimiphumo zeSivumelwano soManyano (1778):
Ngomhla ka-13 kuMatshi, ngo-1778, urhulumente waseFransi wachaza iLondon ukuba baqaphela ngokusemthethweni ukuzimela kwe-United States kwaye bagqibe iiMvumelwano zoBambiswano kunye no-Amity kunye noRhwebo.
Kwiintsuku ezine kamva, iBrithani yathi imfazwe eFransi isebenza ngokusemthethweni. ISpeyin yayiza kungena kwimfazwe ngoJuni ka-1779 emva kokugqitywa kweSivumelwano saseAranjuez neFransi. Ukungena kweFransi kwimfazwe kuboniswe inguqu ebonakalayo kwimpikiswano. Izixhobo zaseFransi kunye nezinto ezazisetyenziswa zaqalisa ukugeleza kwi-Atlantic ukuya eMelika.
Ukongezelela, isisongelo esasenziwa ngumkhosi waseFransi sinyanzelisa iBrithani ukuba iqhube imikhosi evela eNyakatho Melika ukukhusela ezinye iindawo zombuso kuquka iinkoloni zoqoqosho ezisemgangathweni kwi-West Indies. Ngenxa yoko, ubungakanani bezenzo zaseBrithani eNyakatho Melika bekuncinci. Nangona imisebenzi yaseFranco-American yaseNewport, i-RI ne- Savannah , GA yabonakala ingaphumeleli, ukufika kwebutho laseFransi ngo-1780, elikhokelwa ngu-Comte de Rochambeau liza kubakho ubungqina obalulekileyo kumkhankaso wokugqibela wemfazwe. Exhaswe yi-Armed Admiral Comte de Grasse yaseFranti yemoto eyahlula iBrithani kwiMfazwe yaseChesapeake , eWashington naseRochambeau yathuthela eningizimu esuka eNew York ngoSeptemba 1781.
Ukubamba umkhosi waseBrithani weGeneral General iNkosi uCharles Cornwallis , bamncintisa kwiMfazwe yaseYorktown ngoSeptemba-Oktobha ngo-1781. Ukunikezelwa kweConwallis kwaphela ngokuphelile ukulwa eMntla Melika. Ngomnyaka we-1782, ubudlelwane phakathi kwababambisene baba nzima njengoko abaseBrithani baqalisa ukunyanzela uxolo. Nangona ngokubanzi becetyisana ngokuzimeleyo, amaMerika agqiba isivumelwano seParis ngo-1783 esiphelile imfazwe phakathi kweBritani ne-United States. Ngokuhambelana neSivumelwano soManyano, esi sivumelwano soxolo saqale sahlaziywa saza samkelwa yiFrentshi.
Ekupheleni kwemfazwe, abantu baseUnited States baqala ukubuza ubude bomnqophiso njengokuba kungekho mva wokuphela kobudlelwane. Nangona abanye, njengoNobhala weNondyebo u-Alexander Hamilton , bakholelwa ukuba ukuqubuka kweNguqulelo yesiFrentshi ngo-1789 kwagqitywa isivumelwano, abanye njengoNobhala welizwe uThomas Jefferson bakholelwa ukuba kuqhubeka ukusebenza. Ngokuqhutywa kukaLouis XVI ngo-1793, iinkokeli ezininzi zaseYurophu zavuma ukuba izivumelwano neFransi zazingenanto. Nangona kunjalo, uJefferson ukholelwa ukuba umnqophiso usebenza kwaye waxhaswa nguMongameli Washington.
Njengoko iiMfazwe zoBuFrentshi baseFransi zaqala ukuqothula iYurophu, i-Washington Proclamation of Neutrality kanye noMthetho ongathathi hlangothi we-1794 owawusandul Ulwalamano lwaseFranco-Amerika lwaluqala ukuhla kwexesha elide elonakaliswa ngu-1794 Jay Treaty phakathi kwe-United States neBritani. Le nto yaqala iminyaka emininzi yeziganeko zezopolitiko ezigqityiweyo ne- Quasi-War ye-1798-1800. Ejongene kakhulu nolwandle, yabona ukuxabana okukhulu phakathi kweenqwelo zemfazwe zaseMerika neFransi kunye nabazimeleyo. Njengengxenye yempikiswano, iCongress yavala zonke izivumelwano kunye neFransi ngoJulayi 7, 1798. Emva kweminyaka emibili, uWilliam Vans Murray, u-Oliver Ellsworth noWilliam Richardson Davie bathunyelwa eFransi ukuba baqalise iintetho zoxolo. Le migudu yabangela iSivumelwano SaseMortefontaine (iSivumelwano se-1800) ngoSeptemba 30, 1800 ephelile ukulwa.
Esi sivumelwano siphelile ngokusemthethweni ukubambisana okudalwe ngu-1778.
Iprojekthi yeAvalon: Isivumelwano soManyano phakathi kwe-United States neFransi
IThala leeNkcazo: I-Treaty of Alliance, 1778
Isebe likarhulumente wase-US: i-French Alliance
Ukuguquka kweMelika: Omkhulu uYohn Andre
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe yaseSullivan Island
Iimpembelelo zeMfazwe yeNguqulelo yaseMelika eBrithani
Imbali emfutshane yeSibhengezo soKhuseleko
I-American Revolution: iMarquis de Lafayette
Ukuguqulwa kweMelika: Omkhulu Jikelele uJohn Sullivan
I-American Revolution: I-Battle of Eutaw Springs
INguqulelo yaseMelika: jikelele uThomas Gage
Ukuguquka kweMelika: Ubusika kwi-Valley Forge
I-Electrophoresis Inkcazo kunye Nenkcazo
Iimfundiso Nge Las Vegas, Nevada
Umlambo iBirch Ngaba Umthi WaseYard Othandekayo eMzantsi Merika
Masithethe iintetho namazwi
Ngaba uChristopher Columbus wafumanisa iMelika?
I-Hymn Hymn yeRiphabhliki: I-First Published Version
Kutheni i-Grammar Matter?
Indlela yokufakela i-Patent Design
Abadlali abakhulu beMandolin
Top 10 Adam Lambert Iingoma
Izikhumba ze-Delphi ezikhumbisayo
Iimbusi zeegg Shells
I-Interrogative Pronouns in Spanish
Ukuphononongwa kweBhola kwi-AlmostGolf
Indlela yokuqokelela kunye nokulungiselela ama-walnuts okutyala
Eyona ndlela ihamba phambili yoTywala
Iindlela ezili-10 zokugcina iCandelo lakho loNomdla
Ukugxininiswa kweMolar yeIons Example Problem
Ukungabikho kwamanyala kunye noonografi, umkhangeli ophazamisayo